General iwebata - China Ningbo Ruking Ọdụdọ
Nakawa etu esi Ịcha Plotter
Nakawa etu esi Ịcha plotte
Ningbo RUK Technology Co., Ltd. bụ a elu-tech enterprise na-ekere òkè Industrial akpaaka usoro, ngwá na metụtara akụkụ ahụ mapụtara, nakwa dị ka ya zuru set nke usoro R & D, n'ichepụta, ahịa na ọrụ dị ka a dum.
Anyị nwere a ọrụ otu gụnyere eru na iguzosi ike n'ezi ndị mmadụ, na-jide otu ihe dị mkpa post on iche Dept, ígwè, ngwá electronic, kọmputa software na management. Anyị na-enwe imekọ ihe ọnụ na usoro R & D na mma-mara mahadum anụ ụlọ na esenidụt, karịsịa eweta na Europe si technology na ndị ọkachamara. Anyị onwe nnyocha ma mepụtara CAD / cam ike NC ọnwụ usoro, nakwa dị ka ihe njikwa na-akwọ ụgbọala choro na akpaaka ubi. Ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe etinyere na ọtụtụ ọrụ dị ka akpụkpọ anụ, akpụkpọ ụkwụ, n'uwe, akpa, nkwakọ, plastic mgbanwe ihe, compound ihe, igwe ngwaọrụ na elektrọn. Anyị n'ụzọ zuru ezu mejuputa ISO9001 quality management usoro, na merie asambodo ikike anụ ụlọ na esenidụt.
RUK technology na-uche nsiridi na ọhụrụ dị ka ume spirit, iji obi dum na dị ka ọrụ tụụrụ ime ya. Anyị nwere obi ike zuru ezu iji merie gị otuto na ntụkwasị obi site ezi mma, ndị ji ezi obi na ọrụ ma na-eme ka uru ahịa n'okpuru anyị unremitting mgbalị.
Post oge: Mar-06-2018
RUK technology na-uche nsiridi na inno ...